Umaki: izaziso zohlelo lokusebenza lweselula | Martech Zone
Maka: izaziso zohlelo lokusebenza lweselula
ULwesihlanu, May 8, 2020 ULwesihlanu, May 8, 2020 Douglas Karr
Lesi ngesinye sezihloko enginothando olunzima impela kuzo uma kukhulunywa ngamakhasimende ami. Izinhlelo zokusebenza zeselula zingaba elinye lalawo masu aqhubeka nokuba nezindleko eziphakeme kakhulu kanye nembuyiselo ephansi kakhulu ekutshalweni kwemali uma yenziwe kabi. Kepha uma yenziwe kahle, inokutholwa nokuzibandakanya okuphezulu ngobuhlanya. Nsuku zonke izinhlelo zokusebenza ezingaba yikhulu zilayishwa emakethe, lapho amaphesenti angama-100 enza umthelela emakethe.
NgoLwesine, Novemba 7, 2013 NgoLwesithathu, July 23, 2014 Douglas Karr
Isistimu yemvelo yeselula isiqhume yaya kuzinhlelo zokusebenza ezingaphezu kwesigidi eminyakeni emithathu edlule. Izinkampani zilwa nezindleko zokutholwa kwabasebenzisi eziphezulu kanye namazinga okugcina aphansi. Ngaphansi kuka-1% wezinhlelo zokusebenza zamaselula zinikeza inzuzo enhle ekutshalweni kwemali. I-Appboy yisixazululo esiqhutshwa yidatha esenza ukuthi abathengisi bohlelo lokusebenza lweselula bakwazi ukudala amaphrofayili omsebenzisi acebile kuzithameli zabo ezingamaselula, bese ibanika amandla ngohlu lwemikhiqizo ezisebenzisayo yokumaketha: Izaziso ze-Push zinikela ngemininingwane efanele, efike ngesikhathi